डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन नै मेरो टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो : सुवास सुब्बा – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन नै मेरो टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो : सुवास सुब्बा
काठमाडौँ, ११ साउन, २०७६ । ललितपुरको वडा नं. १४ ढोलाहिटीमा छ ‘अन्तिम विकल्प’ । केही समय अघिसम्म पनि असाध्य रोग मानिएको अर्बुद अर्थात् क्यान्सर रोगका विरामी, विरामीका आफन्त तथा अन्य रोगले थलिएका विरामीहरुको चाप छ त्यहाँ । अनुहारभरि निराशा र मनभरि आशा बोकेका विरामी र तिनका आफन्त छन् त्यहाँ । ‘अन्तिम विकल्प’ अर्थात् कहीँ केही नलागेपछि क्यान्सरका रोगीहरुले पुग्ने ठाउँ । यो ठाउँलाई उपचार गर्ने र अनुसन्धान गर्ने ठाउँ मानेका छन् यसका सञ्चालक सुवास सुब्बा लिम्बूले ।
करिब ५ वर्ष अघि अर्थात् २०७१ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा स्थापना भएको यो कम्पनी क्यान्सरका विरामीका लागि अन्तिम विकल्प भएको सञ्चालक सुब्बा बताउँछन् । पूर्वको तेह्रथुमका जन्मिएका सुब्बाले दार्जिलिङ्गे लवजमा भने, ‘अन्त, डाक्टरले फालेकाहरु मात्रै पो हेर्छु त हौ, डाक्टरले आबो केही गर्नु सक्दिन भनेकाहरु मात्रै यहाँ आउँछन् !’ क्यान्सर लागेर डाक्टरले मृत्यु पर्खिन भनेका विरामीहरु मात्रै आफूकोमा आउने गरेको सुब्बाले बताए । उनले भने, ‘अन्त, डाक्टरलाई नदेखाउनु, औषधि नखानु त म भन्दै भन्दिन नि हो, सबै उपाय लगाएर पनि निको नभएका विरामीलाई मात्रै पो हेर्छु त !’ एलोपेथिक, आयुर्वेदिक, होमियोपेथिक सबै प्रकारका औषधि गर्न र खान सुझाव दिने गरेको उनले बताए । ‘जडिबुटी नखा भन्ने डाक्टर ९० प्रतिशत छन्’ उनले भने, ‘तर म त एलोपेथिक नखा भन्दिन, जुन औषधि खाँदै हुनुहुन्छ त्यो खानुहोस् र यो पनि प्रयोग गर्नुहोस् भन्छु ।’ एउटै उपचार पद्धतिमा मात्रै पनि भर पर्न नहुने उनको मान्यता छ । मेरो औषधि मात्रै खानुहोस् निको हुन्छ आफूले नभनेको उनले बताए ।
को हुन् सुबास सुब्बा लिम्बू ?
उनले आफूलाई कहिले पनि डाक्टर भनेका छैनन् । उनले भने, ‘अन्त, म डाक्टर हो भनेर कहिले पनि भनेको छैन, म डाक्टर नै चाहिँ होइन तर डाक्टर भन्दा बिस कदम अगाडि नि ।’ डाक्टरले सीमित विषयमा अध्ययन गरेको हुन्छ भने आफूले धेरै विषयमा अनुसन्धान गरेको उनको दाबी छ । उनी आफूलाई एक अनुसन्धाता मान्छन् । अध्ययन, अनुसन्धानसहित आफूमा दैवी शक्ति पनि प्राप्त भएको उनको दाबी छ । उनको अध्ययन भने एग्रिकल्चर हो, उनले बिएससी एजी गरेका छन् । उनी आफूलाई बोटानिष्ट मान्छन् । उनी गीत पनि गाउँछन् ।
उनले तीनवटा कम्पनी खोलेका छन् । बिसौँ वर्षदेखि विविध विषयमा अनुसन्धान र अध्ययन गर्दै आएको उनको दाबी छ । उनले नेपालमा नाकाबन्दी भएर पेट्रोल र डिजेल अभाव हुँदा आफैँले उत्पादन गरेर बाँढेका पनि थिए । उनमा यतिसम्म आत्मविश्वास छ कि ‘मैले जे गरे पनि, जेमा हात हाले पनि सफल हुन्छु’ भन्ने छ । उनले केही समय अघि ‘ग्रीन वेल्थ इन्डष्ट्री’ खोलेर ‘डलर आफ्नै देशमा’ भन्ने नारा अघि सारेका थिए ।
उनले भविष्यमा एउटा कलेज खोल्ने लक्ष्य लिएका छन् । जसमा एलोपेथिक, होमियोपेथिक र आयुर्वेदिक तीन विषय अध्ययन गराउने उनको योजना छ । ‘एउटा कलेज खोल्छु, त्यसबाटै यस्तो डाक्टर जन्माउँछुकि एलोपेथिक, आयुर्वेदिक र होमियोपेथिक सबै विषयको ज्ञान एउटैलाई होस्’ उनले भने ।
उपचार गर्ने पद्धति
उनले आफैँ केही औषधि उत्पादन गरेका छन् । जसलाई उनले आफ्नै किसिमका नाम पनि दिएका छन् । जसलाई उनले चमत्कार औषधि, दश दिनको औषधि, चुस्ने औषधिजस्ता नाम दिएका छन् । उनले क्यान्सरका रोगीहरुलाई दश दिन, पन्ध्र दिन, बिस दिन र एक महिनाको औषधि खुवाउँछन् । यसरी खुवाउने उनीसँग झोल औषधि छ भने केही ट्याबलेट पनि बनाएका छन् ।
यसैगरी उनको क्लिनिकमा बिरामीलाई थेरापी, मसाज लगायतका सुविधाहरु पनि उपलब्ध छन् । नसा च्यापिएका, प्यारालाइसिस् तथा अन्य शारीरिक समस्या भएका विरामीले उपचार पाउँछन् । उनी हरेक प्रकारको रोगको उपचार गर्न सक्ने दाबी पनि गर्छन् । उनले भने, ‘मधुमेहका विरामीलाई छिट्टै निको पार्ने औषधि तयार गर्दैछु । म अनुसन्धान गर्दैछु के ।’ उनले ४५ दिनमा मधुमेह निको पार्ने औषधि भने तयार गरिसकेका छन् । उनले एचआइभी एड्सको औषधि पनि तयार गरेको दाबी गरे ।
डा. उपेन्द्र देवकोटाको निधन सुब्बाको टर्निङ प्वाइन्ट
उनले एचआइभी एड्सको पनि औषधि तयार पारिसकेका थिए । विरामीलाई भेटे, प्रचार गरे तर कसैले खाइदिएनन् । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र टेकुमा पनि पुगे । तर उनको औषधि बिकेन । आफ्नो क्लिनिकमा केही विरामी आउँथे । उनीहरुले खान्थे तर खासै प्रचारप्रसार र विरामीको फ्लो थिएन ।
जब नेपालका वरिष्ठ डाक्टर उपेन्द्र देवकोटालाई क्यान्सर भएको थाहा भयो उनलाई पीडा भयो । आफूले तयार गरेको औषधि खुवाउन पाए ठीक हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । ‘ऊ त सामान्य मान्छे होइन, उसले हजारौँ मान्छे बचाएको छ, उसलाई त मर्न दिन हुँदैन नि हो, भनेर मैले औषधि खुवाउने प्रस्ताव गरेँ’ उनले भने । यो विषय मिडियाहरुले पनि कभर गरिदिए । डा. देवकोटा विदेशमा उपचार गरेर नेपाल फर्किएपछि एयरपोर्टमै भेटेर पनि उनले प्रस्ताव राखे । तर न देवकोटा उनकोमा उपचार गर्न आए न त सुब्बालाई नै बोलाए । अन्ततः डा. देवकोटाको निधन भयो ।
उनको भिडियो र समाचार देश, विदेशबाट हेरे । लगभग उनी अनलाइनमा भाइरल नै बने । त्यसपछि उनको क्लिनिकमा विरामीको ओहिरो लाग्न थाल्यो । अहिले दैनिक करिब एक सयको हाराहारीमा विरामीहरु आउने गरेका छन् । व्यापार पनि राम्रो भइरहेको छ । डा. देवकोटाको पनि उपचार गर्छु भन्ने मान्छे पक्कै चानचुने होइन भन्ने लागेर विरामीको विश्वास बढेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । डा. देवकोटाको उपचार गर्छु भन्नु र उपचार गर्न नपाई उनको निधन हुनु नै आफ्नो टर्निङ प्वाइन्ट भएको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: 2019-07-28 2019-08-02 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged अन्तिम विकल्प क्यान्सर उपचार सुबास सुब्बा
‘समाजवादी पार्टीसँग एकताको लागि औपचारिक वार्ता भएकै छैन’
योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्रीमा नियुक्त, आजै लिए सपथ
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशम्शेर राणा सिफारिश
एशिया प्रशान्त सम्मेलनः ४० देशका युवा अनुभव आदानप्रदान गर्दै
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय १४औँ वर्षमा प्रवेश
Tags: अन्तिम विकल्प, क्यान्सर उपचार, सुबास सुब्बा